Naya Drishti | गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि खगराज अधिकारीले दिए अनौठो प्रतिक्रिया, को हुन खगराज ? - Naya Drishti गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि खगराज अधिकारीले दिए अनौठो प्रतिक्रिया, को हुन खगराज ? - Naya Drishti
जेठ २७ , काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले अनौठो प्रतिक्रिया दिएका छन । मन्त्री नियुक्त भएपछि प्रतिक्रिया दिदै उनले आफूले कामको विषयमा योजना बनाउन नभ्याएको बताएका छन् । बिहीबार पदभार ग्रहणपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले अन्तिम समयमा मात्र मन्त्री पद टुंगो लागेकाले योजना बनाउन नभ्याएको बताए ।
‘३ बजेसम्म मन्त्री हुने थाहा थिएन । त्यसैले मसँग प्रिप्लान छैन’ उनले भने ‘तर गृह मन्त्रालय २४ घण्टा काम गर्ने मन्त्रालय हो । जनतालाई राहत दिन ढिला गर्नु हुँदैन । गृहबाट हुने काममा अब फाइल घुमाउने छुट छैन ।’
उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री हुँदाजस्तै काम गर्ने बताए । ‘अब त्यही गतिमा जानुपर्छ, कामबाटै परिणाम ल्याऔं ,काममै जाऔं’ उनले भने । मन्त्री अधिकारीले छिमेकी देशको विरुद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिने पनि बताए ।